Cuntada: Waa Maxay Sawirada Ugu Fiican ee Internetka?
waxaa ku jira macluumaadka macluumaadka gaaska mashiinka si fudud loo galo. Waa run in qalabyada shabakadda ee duuban ay si wacan u helaan waqti badan sababtoo ah feejignaanta webku waxay leedahay automated iyo fududeeyaa nidaamka dhan ee taranka si loo sameeyo khayraadka xogta webka oo la heli karo dhammaan isticmaalayaasha internetka. Qaar ka mid ah qalabyada taraq-bixinta ee websaydhku waxay u oggolaadaan dadka isticmaala inay muujiyaan ama raadsadaan boggooda ama blogyada habab hab iyo hab waxtar leh iyada oo aan loo baahnayn xeerarka. Waxay kaloo u beddelaan xogta qaabab kala duwan waxayna u hoggaansamaan shuruudaha isticmaalaha. Halkan waxaan ka wada hadalnay qaar ka mid ah aaladaha tarjumada websaydhka ah si loo jaro shabakadaha iyo blogyada.
Cyotek WebCopy waa barnaamij dhammaystiran oo bilaash ah oo la xoqdo oo kuu ogolaanaya in aad nuqul ka sameysatid boggaaga si aad u akhrido iyadoon isku xirka internetka. Barnaamijkani wuxu baara website-yada la soo bandhigay ka hor inta aanad ku dhicin xogtooda ama waxyaabaha ku jira qalabkaaga adag. Waxay sidoo kale hubinaysaa isku xidhka khayraadka sida sawirrada, bogagga shabakadda, iyo bogga internetka ee bogga, kana reebaya qaybo ka mid ah bogga isku midka ah oo aan micnaheedu ahayn matoorada raadinta. HTTrack
HTTrack waa barnaamij bilaash ah oo bixiya shaqooyin kala duwan iyo xulashooyin ku haboon si aad u soo dejiso boggaga oo dhan internetka. kombuyuutarkaaga ama qalabka gacanta..Qaar ka mid ah qoraaladeeda caanka ah waa Windows, Sun Solaris, Unix, iyo Linux. Barnaamijkani wuxuu u ogolaanayaa inuu ku dhajiyo boggaaga in ka badan hal mar oo uu ka dhigo habsocodka shabakada websaydka si sahlan oo dhakhso badan. Waxa kale oo aad heli kartaa helitaanka sawirrada, faylasha, calaamadaha HTML, wicitaanada, iyo sidoo kale joojinta download kasta mar kasta.
Octoparse waa mashiinka awoodda badan oo bilaash ah oo loo isticmaalo in lagu soo saaro dhamaan noocyada xogta aad ka rabto goobtaada. Barnaamijkani wuxuu isticmaalaa dhowr doorasho si aad ugu rarayso boggaaga si aad u fiican oo leh farsamooyin ballaaran si looga faa'iideysto. Labada nooc ee caanka ah waa Moodhalka Horukacsan (Wizard Mode) iyo Wizard Mode, kuwaas oo ku wanaagsan kuwa barnaamijka ah si loo isticmaalo Octoparse marnaba. Waxaad ka soo dejisan kartaa boggaaga daqiiqadaha iyadoo la isticmaalayo qalabkan dhamaystiran. Waxaa intaa dheer, waxaad ku kaydin kartaa boggaga qaabab kala duwan oo wanaagsan sida Excel, HTML, iyo qoraalka.
Getleft waa barnaamij sahlan oo si sahlan u isticmaali kara bood ama goob deg deg ah. Waxay soo dejin doontaa boggaaga oo dhan waxayna haysaa fursado badan si looga faa'iideysto. Waxaad sidoo kale geli kartaa URL-ka oo dooro feylasha aad rabto inaad soo dejiso nidaamka kombiyuutarkaaga. Barnaamijkani waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, sababtoo ah wuxuu ka yimaadaa 15 luqadood oo kala duwan, wuxuu leeyahay 24/7 taageero, wuxuuna ka dhigayaa waayo-aragnimadaada xiisaha leh ee aad u fiican.
Gawaaridu waa cirrid caanka ah oo caan ah oo leh xaddidaadyo xog kooban oo kooban, laakiin waxay gacan ka geysaneysaa samaynta baaritaanka internetka. Waxay sidoo kale dhoofinaysaa xogtaada Google Spreadsheets halkii aad ka heli lahayd kombiyuutarkaaga, inaad ku badbaadiso waqti badan Source .